Xildhibaano taageersan madaxweyne Farmaajo oo ku shiray Muqdisho daawo muuqaalka - Banaadisom
Home Muuqaalo Xildhibaano taageersan madaxweyne Farmaajo oo ku shiray Muqdisho daawo muuqaalka
Xildhibaano taageersan madaxweyne Farmaajo oo ku shiray Muqdisho daawo muuqaalka
Waxaa maanta magaalada Muqdisho ka dacay kulan ay ka qeyb galeen xubno isagugu jira wasiirro, siyaasiyiin kale iyo xildhibaanada labada gole ee baarlamanaka federaalka ee kasoo jeeda gobollada waqooyi.
Shirkan oo soo qaban qaabiyeen dhallinyarada kasoo jeeda gobollada waqooyi ayaa looga hadlay arrimaha doorashada dalka, waxayna dhinacyadii isugu yimid shirkaas sheegeen in ay taageersanyihiin guddiyada lagu muransanyahay ee doorashada oo xubnaha ku metelaya Somaliland ay xukuumaddu magacaawday.
“Waxaan arkeynay dad dhahaya cid nagu metelaysay ma jirto heshiiskii laga gaaray doorashada, taasi waa been anigoo idinka idin metelaaya ayaan qeyb ka ahaa saxiixayaasha heshiiska doorashada iyo habraacyada seddaxda ah ee lagu dhisaayo guddiga doorashada heer federal, heer dowlad goboleed iyo guddiga xalinta khilaafaadka ee heer federal, seddaxdaba magaceyga iyo saxiixeygaa ku yaalla, taas macnaheydu waa inaan idinka idinku metelaayey,” ayuu yiri Mahdi Guuleed.
Waxa uu sheegay in habraacaas ay ku kalsoonyihiin, isagoo ka dhawaajiyey in dhalinyarada ay ku soo dhaweynayaan siyaasadda, “Aan tartan walaaleheen cidii ay u codeeyaan xildhibaan qaran ha noqdo,” ayuu hadalkiisa ku sii daray.
“Waxaanu diyaar u nahay doorasho, waxaan diyaar u nahay in doorasho loo dareero oo aan is doorano, laguna kala nabad galo. Muran kasta oo yimaada wuxuu dib u dhigayaa doorashada, Taa macnaheedu ma waxa ay tahay doorasho diyaar uma ahiye dib ha la iigu dhigo, Doorashada wakhtigeeda ayaan ku qabaneynaa, Hadii ay tabasho jirto diyaar baa loo yahay in lagu dhageysto,” ayuu kulankaas ka yiri Mahdi Guuleed.
Previous articleJubbaland oo go’aan cusub oo xasaasi ah kasoo saartay doorashooyinka dalka (Aqriso)
Next articleXOG: Shacab aad u careysan oo MD Farmaajo ka hor istaagay xaflad oo ka qeyb geli lahaa maanta